ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
Procedures for the Application of Permanent Residence
The Application Form for the Permanent Residence
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး ကျသင့်ငွေနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅
နောက်ကျဒဏ်ကြေး( ၁) နှစ် - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅
( ယခင်က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ဝ နှင့် ဒဏ်ကြေးတစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀ ကောက်ခံခဲ့သော်လည်း ၃-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သက်တမ်းတိုးခအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ နှင့် ပျောက်ဆုံး ဒဏ်ကြေးအား ၇၅ ဒေါ်လာသို့ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် -
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် (မူရင်း) နှင့် ယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် မိတ္တူ၊
၂ လက်မပတ်လည် နောက်ခံအဖြူဖြင့် ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ တို့ကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Permanent Resident Card/ Green Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ တင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် ယင်းနောက်ပိုင်း ကာလများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ယင်းမတိုင်မီ ကာလများတွက် ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ဝင်ငွေလစာ၏ ၁၀% အား ဝင်ငွေခွန်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ကောင်စစ်နယ်မြေဒေသအတွင်း ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်မည့် အနိမ့်ဆုံး အခြေခံလစာအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၀ သတ်မှတ်ထားပြီး ဝင်ငွေခွန် တစ်လလျှင် ၁၀% ဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂျမေကာနိုင်ငံအတွက် အနိမ့်ဆုံး အခြေခံလစာအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ သတ်မှတ်ထားပြီး တစ်လလျှင် ဝင်ငွေခွန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀ နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ ပေးဆောင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅၇/၂၀၁၁) အရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိအား ဝင်ငွေခွန်၏ ၂% ဖြင့် နယူးယောက်ကောင်စစ်နယ်မြေအတွက် တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဒေါ်လာကိုလည်းကောင်း၊ ဂျမေကာနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာကိုလည်းကောင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကြိုတင်ပေးဆောင်ပြီး သူများ၏ အခွန်ပြန်အမ်းရန်ကိစ္စသည် ဥပဒေနောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါသဖြင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၁။ ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်သူနှင့် မှီခိုသူမိသားစုဝင်များ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း
ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ၎င်းအား မှီခိုနေထိုင်လျက်ရှိသူ မိသားစုများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဖတ်ရှုတွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားအား မှီခိုသူ ဇနီး၊ အတူနေ ပညာသင်ကြားနေ သော သား (အသက် ၂၀ နှစ်နှင့်အောက်)၊ သမီး ( အသက် ၂၅ နှစ်နှင့်အောက်)၊ အတူနေ မိဘ (အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက်) များကိုသာ မိသားစုဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
ယခင်က ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ဖူးပါက ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ဝင်ငွေခွန် ပြေစာမိတ္တူ၊ ဇနီး/ သား၊သမီး/ မိဘ တော်စပ်ပုံအထောက်အထား (မွေးစာရင်းမိတ္တူ/ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ/ အိမ်ထောင်စုစာရင်း) စသည်တို့ကို တင်ပြရပါမည်။
၂။ နိုင်ငံခြားသား သား/သမီး မှီခိုသူ အသက်(၆၀)နှစ်အထက်နှင့် သား/သမီးများ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း
အသက် (၆၀)နှစ်နှင့်အထက် မိဘများမှ နိုင်ငံခြားသား/သမီး မှီခိုသူများ လေ ျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။
အတူနေ ပညာသင်ကြားနေသော သား (အသက် ၂၀ နှစ်နှင့်အောက်) / သမီး ( အသက် ၂၅ နှစ်နှင့် အောက်) မှ နိုင်ငံခြားသား မိဘအား မှီခိုနေသော သားသမီးများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးမည့် အတူနေ မိဘ (သို့မဟုတ်) သားသမီးအား နိုင်ငံခြားသား သားသမီး(သို့မဟုတ်) မိဘမှ အမေရိကန်တွင် ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း နေထိုင်စားသောက် စရိတ်များ တာဝန်ယူသောစာအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
နိုင်ငံခြားသား သားသမီး (သို့မဟုတ်) မိဘ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနိုတြီ/ နိုင်ငံသားခံယူထားသည့် လက်မှတ် ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
တော်စပ်ပုံအထောက်အထားအဖြစ် (မွေးစာရင်းမိတ္တူ/ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ/ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ) တို့အား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
၃။ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း
အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တွင် အချိန်ပြည့်တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အချိန်ပြည့် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း) ၊ ကျောင်းသားကဒ် (မိတ္တူ)၊ I-20 မိတ္တူနှင့်အတူ ပူးတွဲ လျှောက်ထားရပါမည်။
၄။ နိုင်ငံခြားသားခင်ပွန်းဖြစ်သူအား မှီခိုအဖြစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း
နိုင်ငံခြားသား ခင်ပွန်းမှီခိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား မှီခိုအဖြစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် အပြန်လေယာဉ်စရိတ်အာမခံငွေ (Return Air Ticket Fee) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ပေးသွင်းလျှောက်ထားရပါမည်။
အပြန်လေယာဉ်စရိတ်အာမခံငွေသည် မြန်မာနိုင်ငံသူနှင့်သာ အကြုံးဝင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ခံယူ ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် (သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့ပါလျှင် (သို့မဟုတ်) ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးခဲ့ပါလျှင် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်အား ပြန်လည် အပ်နှံ၍ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းမူရင်းနှင့်အတူ အထောက် အထား ပြည့်စုံစွာ တင်ပြ၍ အဆိုပါ အပြန်လေယာဉ်စရိတ်အား ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခင်ပွန်း၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနိုတြီ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားခံယူထားသော လက်မှတ် နှင့် လက်ထပ်စာချုပ် မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
၅။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ၎င်းအား မှီခိုနေသးများ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း
လျှောက်ထားသူသည် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ထောက်ခံစာနှင့် ရုံး ID Card မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
၎င်းအား မှီခိုသူ ဇနီး၊ အတူနေ ပညာသင်ကြားနေသော အတူနေ ပညာသင်ကြားနေသောသား (အသက် ၂၀ နှစ်နှင့်အောက်) ၊ သမီး ( အသက် ၂၅ နှစ်နှင့်အောက်)၊ အတူနေ မိဘ (အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက်) များကိုသာ မိသားစုဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
ဇနီး/ သား၊သမီး/ မိဘ တော်စပ်ပုံအထောက်အထား (မွေးစာရင်းမိတ္တူ/ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ/ အိမ်ထောင်စုစာရင်း) စသည်တို့ကို တင် တင်ပြရပါမည်။
၆။ မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း
မွေးဖွားသည့်နေ့မှ ၁ နှစ်အတွင်း တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် အကျုံးဝင်မှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ပြီး ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ မိဘမှ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်ရပါမည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ် စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏ မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်း မရှိကြောင်း ခံဝန်ချက်နှင့် ကလေးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်းစာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
မိဘ၂ပါးသည် Permanent Resident Card/ Green Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာတင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် အသစ် လျှောက်ထားခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဖခင်မှ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက မိခင်မှ နိုင်ငံခြားသားမှီခို အပြန်လေယာဉ်စရိတ်အဖြစ် အာမခံ စပေါ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ပေးသွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပါက ပေးသွင်းပြီး မိတ္တူနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
ဖခင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန်ကျေပွန်ပြီး ဖြစ်ရပါ မည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်းမရှိကြောင်း ခံဝန်ချက်နှင့် ကလေးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်းစာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးဦးသည် Permanent Resident Card/ Green Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာတင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ (၁) စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
၈။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွား၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် နို်င်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (၄)စုံ၊ ရဲစခန်းသို့ ပျောက်ဆုံးကြောင်း တိုင်ကြားထားသော ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ (Police Report) မူရင်းအပါအဝင်(၄)စုံ၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၄)စုံ၊ အခွန် ထမ်းဆောင်ပြီးဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ပြေစာမိတ္တူ(၄)စုံ၊ အခွန်မထမ်းဆောင်ရသေးပါက ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့ အထိ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသားဖြစ်ပါက အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြ၍ လည်းကောင်း၊ မှီခိုသူဖြစ်ပါက မှီခိုသူ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း များ တင်ပြ၍ လည်းကောင်း တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅ နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ကျသင့်ပါမည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၅၇/၂၀၁၁ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ၁၉-၈-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ ၂% ဖြင့် ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကြိုတင်ပေးဆောင်ပြီး သူများ၏ အခွန်ပြန်အမ်းရန်ကိစ္စသည် ဥပဒေ နောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါသဖြင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ယင်းနောက်ပိုင်း ကာလများအတွက် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
၉၊၊ သာသနာ့၀န္ထမ္း သံဃာေတာ္မ်ားနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးပါက
(က) လက္ရွိသီတင္းသံုးေနသည့္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၏ ေထာက္ခံစာမူရင္း
(ဂ) အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကတ္ မူရင္း (သို႔မဟုတ္) ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ (သို့မဟုတ္) ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထား တစ္ခုခု
(င) ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္နွင့္ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု တို႕ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဂျမေကာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ
ဂျမေကာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက-
လက်ရှိကိုင်ဆောင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ တင်ပြရပါမည်။
လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်း ရိုက်ထားခဲ့သည့် ရောင်စုံဓာတ်ပုံအား ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပြီး ယင်းဓာတ်ပုံမှာ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၂လက်မပတ်လည် ရှိရပါမည်။ ဓါတ်ပုံ၏ နောက်ခံအရောင်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အချက်(၄၄)ချက်ပါ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့် လက်မှတ်နှင့် လက်ဗွေပုံစံကို ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ဗွေပုံစံအတွက် ဘယ်နှင့်ညာ လက်မလက်ဗွေကို စာရွက်အဖြူပေါ်တွင် မင်နှိပ်၍ လည်းကောင်း၊ ရေးထိုးမြဲလက်မှတ်ကို စာရွက်အဖြူပေါ်တွင် မင်အမည်းဖြင့် ထင်ရှားစွာ ရေးထိုး၍လည်းကောင်း ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား မူရင္းကို ျပသျပီး မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုပါသည္၊၊
ဝင်ငွေခွန် နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားခဲ့သည့် ပြေစာအား ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဝင်ငွေခွန်ကျေပွန်စွာ ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလိုသူသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဝင်ငွေခွန်ကျေပွန်သူ မဟုတ်ပါက ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် ယင်းမတိုင်မီကာလများအတွက် တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀ ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးဆယ်တိတိ) နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိအတွက် တစ်လလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဒေါ်လာတိတိ) ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၇/၂၀၁၁) အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် ယင်းနောက်ပိုင်းကာလများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင် ရန် မလိုအပ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ဆယ့်ငါး တိတိ) ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်မှုရှိခဲ့ပါက ယင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးတစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ (အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဆယ့်ငါး တိတိ) ဒဏ်ကြေးပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၀င္ေငြခြန္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ေပးသြင္းေငြႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားအား ေငြလႊဲလက္မွတ္ (Money Order) မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး Jamaica Money Market Brokers (JMMB), National Commercial Bank Jamaica Limited ႏွင့္ The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited စသည့္ ဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္သည့္ ေငြလႊဲလက္မွတ္မ်ား (Money Order) မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
စာတိုက်မှတစ်ဆင့် စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းအတွက် FedEx ဖြင့်သာ ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသို့ပေးပို့သည့်အခါတွင် ကာယကံရှင်ထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်မှ လိပ်စာဖြည့်စွက်ထားသည့် International Airway Bill နှင့် Return Envelope ကို ပူးတွဲပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကာယကံရှင်ထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းအတွက် FedEx သို့ ငွေပေးချေရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်ရာ ယင်းအတွက် ကျသင့်ငွေကို ကာယံရှင်မှ ကြိုတင်တွက်ချက်၍ FedEx သို့ ပေးဆောင်ရမည့် ငွေလွှဲလက်မှတ် (Money Order) တစ်စောင်ကိုလည်း သီးခြားထည့်သွင်း၍ ပေးပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
- အခွန်နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူ
- Myanmar Mission သို့ လိပ်မူသည့် Money Order (၁) စောင်
- FedEx သို့ လိပ်မူသည့် Money Order (၁)စောင်
- ကာယကံရှင်ထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့်လိပ်စာဖြည့်စွက်ထားသည့် International Airway Bill
နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားသို့အသိေပးေၾကညာခ်က္ ( 8 September 2015)
Working Hours Announcement for Consular Division
Services rendered to Myanmar citizens
Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations in New York is pleased to announce that following services will be rendered to Myanmar Citizens:
* Issuance of New Passport
* Issuances of Certificate of Identity (C of I)
* Attestation of Power of Attorney
* Attestation of Certification
* Matters needed to be referred to the respective Ministry
Consulate-General of Myanmar in New York is providing the consular services to those who are residing in tri-state area ( New York, New Jersey and Connecticut) and Jamaica only. The applicants in other States should apply to Myanmar Embassy in Washington,DC. www.mewashingtondc.com .
* Passport original
* copy of old passport
* Income Tax payment must be up to date when applying foranew Passport
* Two passport-sized photos
* Personal history form ( C.V. form )
* Renewal Fees $ 25 (cash or money order only )
* Processing time: five (05) working days
Note : Myanmar Passport holders are required to renew their Passports before the date of expiry. A fine will be levied if the Passport is not renewed in time. Myanmar Passport holders and their dependents are eligible to renew the Passport when there are onlyafew pages left.
Issuance of New Passport (Damage)
* Copy of all pages of the Passport
* Fees $ 25 (cash or money order only )
Note : The applicant who lost the passport are required to submit the Police Report andafine US$ 75 will be levied.
Issuance of New Passport (new born child)
* Inclusion of new born child in mother's Passport
* Separation of child from mother's Passport and issuance of new Certificate of Identity ( C of I )
* Inclusion ofachild who holds C of I to mother's Passport
* Change of status to dependent of foreign husband or wife
* Change of status from seaman to shore job and vice versa
Attestation of Powers of Attorney
* Revenue stamped document.
* Signature of2witnesses.
* Particulars of witnesses such as Passport No. NRC No, address must be stated.
* Person authorizing GP / SP must come to the Permanent Mission in person and sign before the Consular officer.(Required to bring an original passport to be seen).
* Photo copy of GP / SP and passport
Documents such as Birth Certificate / Marriage Certificate/ Degrees / Diploma / Driving license..... Etc. need to be notarized byaregistered Notary Public in Myanmar and; subsequently endorsed by the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw, before submitting to the Permanent Mission for attestation / certification.
For First Time Payment of Income Tax
* Company letter stating employees' monthly basic salary.
* Application Letter addressed to the Permanent Mission.
Original document(s) that is (are) to be legalized must be submitted together with the followings:
* Letters issued from Notary Public
* Request letter addressed to Myanmar Mission to legalize the document
* A three (3) set of copy of document(s) and the original to be legalized.
Service charge is $ 15 per document.
Opening Bank Account(s) at or Changing Signatories of Bank Account maintained with one of the Banks in Myanmar.
Original document(s) must be submitted together with the followings:
* Request letter addressed to Myanmar Mission
* A set of copy of document(s).
After submitting the document, appointment date will be informed to sign the document in the presence of an officer from Permanent Mission. NRIC card of person who will sign on the Bank Specimen Card must be brought along on the appointment day. Service charge is $ 10 per document.
2. Myanmar Passport Extension Form
3. Attestation Forms
Attestation For Dependent Status
Attestation For G4 Dependent
Attestation For General Power Document
Attestation For Income Tax Payment
Attestation For Student Status
Attestation For Tax Examption
You are here: Home Consular Consular Information